သောင်းပြောင်းထွေလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 357
ကာတွန်း – ကျော်သူရိန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း ကျော်သူရိန်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ No tags for this post.
ကာတွန်းစောငို – အပါယ်ဘုံမှာ အတူတူဆုံကြမယ်
ကာတွန်းစောငို – အပါယ်ဘုံမှာ အတူတူဆုံကြမယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ဥပဒေ၏အထက်တွင် လူ့ဂုဏ်ရည်ရှိသည် မောင်လူရေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ယနေ့တိုင်းပြည်တွင် ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်တိုက်၍ သေဆုံးရသည့်အရေအတွက်မှာ ပြည်တွင်းစစ်တွင် သေနေသည်ထက် မလျော့ပေ။ တိုင်းသူပြည်သားများ၏အသက်ရှင်မှုကို ကာကွယ်ပေးရန်မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏တာဝန်ပင်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏တာဝန်ဆိုသည်မှာ မျှတသည့်ဥပဒေ၊ သင့်လျှော်သည့်ဥပဒေပြဌာန်း၍ ယင်းဥပဒေကို သေချာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကို ဆိုပေသည်။ ဥပဒေတခု အရင်းပြု၍ ခုဆယ်ရာထောင်သောင်းမှသည် သိန်းပေါင်း သိန်းသန်းကုဋေဖြစ်ဖို့လုပ်သည်ကို မဆိုလိုပေ။ ထို့ပြင်တဝ တိုင်းသူပြည်သားများ လူလိုနေနိုင်အောင် လူနှင့်တူအောင် လူ့ဂုဏ်ရှိအောင် နေနိုင်ရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးရမည့်တာဝန်လည်း ရှိပေသည်။ လူ့နှင့်တူအောင်ဆိုသည်မှာ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်ရမည်။ တနပ်လျော့စားခိုင်းသော ဝန်ကြီးကား ကိုယ့်ရာထူးကို ပြာလူးခြင်းဟု ဆိုရချေတော့မည်။ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားများ လူရာဝင်အောင် ထမ်းဆောင်ရမည့်ကိုယ့်တာဝန်ကို မေ့နေဟန်တူပေသည်။ အမိုက်ရိုင်း အထွားကျိုင်းဆုံးမှာ လယ်သမားရေးရာတာဝန်ယူပြီး လယ်သမားများကို အငတ်ခံခိုင်းသည့် အချက်ဆိုးကြီးပင်။...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ကမ္ဘာတွင်မယ့် ဗမာ့အရေး ဟာသများ (၃)
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ကမ္ဘာတွင်မယ့် ဗမာ့အရေး ဟာသများ (၃) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း – ဆလိုင်းစွမ်းပီ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – နင်ပြောချင်တာပြော၊ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – နင်ပြောချင်တာပြော၊ ငါလုပ်ချင်တာလုပ် ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း စောငို – ငရဲကလူ ပြာပူမကြောက်၊ လယ်သမားလည်း မကြောက်
ကာတွန်း စောငို – ငရဲကလူ ပြာပူမကြောက်၊ လယ်သမားလည်း မကြောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း – ATH ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်းစောငို – မကျေနပ်ရင် စစ်လို့ရတယ်
ကာတွန်းစောငို – မကျေနပ်ရင် စစ်လို့ရတယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
မြေအောက်ရေ၊ရေအရည်အသွေး (ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တိများ) နှင့် ကျန်းမာရေး၊ မောင်ကျေးရေ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၃ ● စကားဦး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ရေးမရမှီခေတ်ကာလကစ၍ မြေအောက်ရေကို သုံးစွဲလာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထိဖြစ်ပါသည်။ နောင်ကာလများ တွင်လည်း ဆက်လက်သုံးစွဲနေရဦးမည်ဖြစ်ရာ ထိုသုံးစွဲသူများအတွက် အခြားတိုးတက်နေသောနိုင်ငံများ၊ တိုးတက်ပြီးသောနိုင်ငံများမှာကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေအောက်ရေသုံးစွဲေ နသောပြည်သူပြည်သားများ ပညာဗဟုသုတရစေရန်နှင့် ကိုယ်တိုင်သိရှိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရန် ရည်သန်လျက်၊ စာရေးသူတတ် သိနားလည်ထားသည်များကိုအခြေခံ၍ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားပါသည်။ အဆိုပါတိုးတက်နေသော၊ တိုး တက်ပြီးသောနိုင်ငံများတွင် စက်ရေတွင်းတူးကန် ဒါရိုက်တာများ၊ စက်ရေတွင်းတူးဖေါ်လိုသူများ၊ တူးဖေါ်ထားပြီးသူများ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သိသင့်သိထိုက်သော မြေအောက်ရေနှင့်စက်ရေတွင်းများဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များ၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော ဓါတုဗေဒဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပြည်သူ့ကျမ္မာရေး (Chemical properties and Public health) တို့ကို သတင်းစာ၊ စာစောင်၊...
Page 357 of 418«1...355356357358359...418»
ပန်းသီး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာသ - Pan Thee
ကာတွန်း ညီထွေး - ဒိုင်းညောင့်ခေတ်